13 ka mid ah ciidamada difaaca dalka oo ku dhintay diyaaradii burburtay | Star FM
Home Wararka Kenya 13 ka mid ah ciidamada difaaca dalka oo ku dhintay diyaaradii burburtay
13 ka mid ah ciidamada difaaca dalka oo ku dhintay diyaaradii burburtay
10 ka mid ah ciidamada hawada ee dalka ayaa ku dhintay halka 13 kalana ay k udhaawacmeen ka dib markii saaka ay diyaarad nooca qummaatiga u kacdo ee loo yaqaano Helikobtarka ku burburtay aagga Ole Tepesi ee Ngong oo ka tirsan ismaamulka Kajiado.
Afhayeenka ciidamada Diifaca Col.Zipporah Kioko ayaa sheegtay in dhaawaca saraakiisha loo qaaday isbitalka ciidamada qalabka Memerial magaladatani Nairobi.
Ilaa iyo hadda ma cadda sababta keentay dhacdadaasi in kastoo ay socdaan baaritaano lagu xaqiijinaya. Balse Afhayenka Ciidamada Milatariga Zippoarah ayaa sheegtay in baarayaasha ay tageen goobta isla markaana ay xaqiijinayaan sababta shilka.
Previous articleDHAGEYSO:Wiil dhalinyaro oo bajaajley ah oo lagu dilay Wajeer
Next article741 qof oo laga helay fayraaska Corona halka 24 bukaan ay u geeriyoodeen